Sanduuqa Shiinaha iyo Sanduuqa Baakadaha ee Dhalada ah ee loogu talagalay Wig Ama Soo-saaraha Dharka iyo Soo-Saaraha | Daabacaadda Aqoonta
Sanduuqa Baakadaha iyo Suuqa Dhalada ah ee Wig Ama Dharka
Magaca badeecada: daboolka iyo santuuqa baakadaha hoose ee wig ama dharka
Cabirka dibedda: 26x13x6.2cm
Cabbirka gudaha: 25.5 × 12.5x 5.7cm
Qalabka: 2mm cawlan oo caag ah ayaa ku duudduubay 157g warqad daboolan
Midab: cad, caado
Farshaxanka: shaambada kulul, goynta matte
Qiimaha qeybta: usd2-usd10
Dekadda FOB: Qingdao, Tianjin, Shanghai, iwm
MOQ: 100pcs oo loogu talagalay dalabka caadiga ah
Daabacaadda Aqoonta ee Qingdao waa sanduuq soo saare oo ku yaal Qingdao, CHINA. Khibrad wax soo saar hodan ah oo ka badan 16sano, waxaan bixin karnaa qiimo fiican, tayo iyo qaabab badan oo sanduuq ah oo lagu xusho. Kaarboorka cas ayaa ka dhigaya sanduuqan mid aad u qurux badan, macaamiil badan ayaa jecel.
Naqshadaynta → naqshadaynta → daabacaadda mination Magaca filimka → goynta → dhimidda goynta ins Kormeerka tayada 'kaydinta' dhoofinta
Maxaa annaga noo ah?
100% soo saare.
Saxaafadda horumarsan iyo koox shaqo khibrad leh.
Xakameyn u xakameyn tayo leh oo laga soo xusho sheyga, tijaabada mashiinka horay loo soo saaray ilaa sheyga la dhammeeyay.
Iyada oo sannado ah khibrad soosaarida soosaarida, kooxda xirfadleyda ah ayaa waqtigooda kaga jawaabi kara su'aalahaaga.
Alaabooyinkayada oo dhan waa la sixi karaa. Waxkasta oo SIZE ah, qaab, naqshad, astaan ​​ayaa buuxin kara shuruudahaaga, wax walba waan sameyn karnaa.
Waxaan bixin karnaa adeeg naqshad bilaash ah. Qaabka shaqada Farshaxan: PDF, INDESIGN, AI
(1) Saamiyada hadda jira waa bilaash.
(2) qiimaha muunadda ayaa laga qaadi doonaa shay-baarka la diyaariyey, kaasoo laga soo celin doono wax-soo-saarkii guud.
(3) waqtiga hormarka muunadku waa 3-5 maalmood.
(1) qiimaha tartan
(2) fal deg deg ah oo muunado ah
(3) <24 saacadood jawaab dhakhso leh
Q1: miyaad haysaa alaab badan oo iib ah?
Dhammaan alaabadayada waxaa loo qaabeeyey loona soo saaray iyadoo loo eegayo baahida macaamiisheena. In yar ayaa haysata.
Q2: ma tahay soo-saare?
Haa, waxaan haysanaa warshad noo gaar ah waxaanan ku siinaynay xalka xirfadleyda wershadaha daabacaadda iyo baakadaha muddo 16 sano ah.
Q3:Waa maxay tirada ugu yar ee dalabkaaga?
Caadi ahaan, MOQ-kiisa waa 500 kumbuyuutar, in kasta oo mararka qaar aan soo saarno wax ka yar 500 oo kumbuyuutar. Si kastaba ha noqotee, qiimaha amar yar ayaa u muuqda inuu aad u sarreeyo marka la duubo, la daabacayo, qalabaynta iyo kharashaadka dejinta.
Q4: Sideen ku heli karaa muunad hubinaya tayadaada?
Kadib marka qiimaha la xaqiijiyo, waxaad weydiisan kartaa muunado muunad ah si loo hubiyo tayadayada. Bilaash ayaa ah muunad madhan si aad u hubiso naqshadda iyo tayada warqadda, laakiin waa inaad bixisaa dhoofinta degdega ah.
Soosaarista tusaale ahaan, waxaan ku dallaci doonaa usd30-100 si aan u daboolo qiimaha toogashada iyo daabacaadda. Qiimaha ugu dambeeya ayaa la xaqiijin doonaa iyadoo la raacayo habka loo marosheyga.
Q5: macluumaad noocee ah ayaan kuu sheegayaa hadii aan rabo inaan helo wax?
1) qaabka sanduuqa
2) Cabbirka badeecada (dhererka × ballac × dherer)
3) maaddada iyo daaweynta dusha sare
4) midab daabacan
5) haddii ay suurtagal tahay, fadlan bixi sawirro ama jeeg naqshad. Tusaalooyinka waxay noqon doonaan caddeynta ugufiican, hadii aysan aheyn, waxaan kugula talineynaa faahfaahinta badeecada laxiriira tixraaca.
Q6: Goormaan heli karaa qiimaha?
Waxaan sida caadiga ah soo xiganaa 24 saacadood gudahood kadib markaan helno weydiimahaaga. Haddii aad ku riixeyso qiimahan, fadlan na soo wac ama noogu soo sheeg emailkaaga waxaan tixgelin doonnaa mudnaantaada baaritaanka.
S 7: Markaan abuurno farshaxan, qaab noocee ah ayaa loo isticmaali karaa daabacaadda?
1) PDF caan ah, CDR, AI, PSD
2) dhiigbax: 3-5mm
Q8:Immisa maalmood ayaa shaybaarka la diyaarshay la dhammaystiri doonaa? Ka waran wax soo saar ballaaran?
Guud ahaan 3-5 maalmo shaqo ayaa loo qaataa soosaarka.
Waqtiyada wax soo saarka tiro badan, in qofku daacad noqdo, wuxuu kuxiran yahay “tirada inta” iyo “xilli”, oo booskaagu waa “nidaam”. Waxaan kugula talineynaa inaad billowdid su’aashaada laba bilood ka hor taariikhda bilaabashada si aad u soo iibsato alaabada dalkaaga.
Q9:Ma hubisay badeecada dhamaatay?
Haa, alaabadayada oo dhan waxay mari doonaan habraacyada kormeerka tayada.
Q10:Sideed u dhoofisaa badeecada dhameysatay?
3) iyada oo loo maro DHL, FedEx, UPS, TNT, iwm.
Hore: White Clamshell Wig Box oo leh Ribbon iyo Satin
Xiga: Ku Dhig Santuuqa Dharka Sare oo Ay Kujiraan Magnets
Bakhaarka iibinta kulul ee kuleylka ah ee Amazon
Sanduuqa Mashiinka Maskaxda leh Mashiinka Dheeman leh